mairie-antananarivo – Boriboritany Fahaefatra: Fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny « Tsikonina andiany fahavalo »
Boriboritany Fahaefatra: Fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny « Tsikonina andiany fahavalo »
auteur 19 jona 2017 Commentaires fermés
Toy ny isan-taona, mandritra ny volana jiona izay sokajina ho volan’ny ankizy, dia mikarakara hetsika ho fanamarihana izany ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy androany ny zoma 16 jona teo, ny “TSIKONINA andiany fahavalo” tamin’ity taona 2017 jiona, tetsy amin’ny sekoly tsy miankina “college-lycée HANITRA” ao anatin’ny fokontany Anosibe Mandrangombato II eo anivon’ny boriboritany fahaefatra.
Ny tanjona amin’izao hetsika izao dia ho fanandratana avo ny akora Malagasy sy ny sakafo Malagasy ary koa ny kolontsaina maha malagasy. Anisan’ny fampandraisana andraikitra ny ankizy ihany koa ny toy izao, mba hitaizana azy ireo ho olom-banona. Taloha dia natao teny amin’ny EPP Antanimbarinandriana ny fifaninanana, fa tamin’ity indray mitoraka ity kosa dia hatao manerana ny boriboritany enina, izay niantsoana ny ankizy na mpianatra na fikambanana ahitana ankizy 8 ka hatramin’ny 12 taona. Misy araka’izany ny fandaharam-potoana izay hanatanterahan’ny boriboritany ny fifanitsanana.
Ho an’ny boriboritany faha efatra manokana dia tarika miisa sivy no nifaninana tamin’ity tsikonina andiany fahavalo ity, ka nitondra anaramboankazo avy ny tarika tsirairay nentina nanavahana azy ireo. Marihina fa, tarika telo tamin’ireo tarika niisa 9 no tafakatra ho amin’ny dingana famaranana izay hatao eny amin’ny PADDOCK Mahamasina amin’ny 30 jiona 2017 ho avy izao. Ny tarika “fraise” no nitana ny laharana voalohany, nanaraka azy ny tarika “pasthèque”, ary ny fahatelo ny tarika “Orange”.
Ny ankizy rehetra nifaninana dia nahazo biscuit sy arendrina avokoa. Ny tarika nahazo ny laharana faha telo voalohany dia nahazo ny fitsidihana an’Antananarivo Renivohitra, ankoatr’izay, dia nahazo lelavola 2.000ar ny ankizy tao amin’ny tarika nandresy miampy lelavola mitentina: 30000ar ho an’ny voalohany, 25000ar ho an’ny faharoa, ary 20000ar ho an’ny tarika fahatelo.
Fandiovana ny lakan-dranon’Andriantany Ankadimbahoaka
CUA: Fanadiovana sy fikaohana fako sy fotaka goavana
Boriboritany Fahadimy : Fananganan-tsaina
Boriboritany Voalohany : Manarintsoa Anatihazo
Tanà, Ville moderne et agréable
Kaominina antananarivo renivohitra : boriboritany faha-3
Tetibola 2018 kaominina antananarivo renivohitra
Asaramanitra Ny Cua
Fanazavana nataon’ny kaominina antananarivo renivohitra momba ilay fanakatonana trano tsy ara-dalana tetsy tsiazotafo.